Ụlọikpe Canada: Ụlọ nke Commons
Ụkpụrụ Dị Mkpa
Ihe ndị mebiri
Aha aha nna ya na Origins
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu & ihe omume
Ndị isi US
Ekọwapụta nke Usoro Iwu
Okpukpe na nke ime mmụọ
Ọgwụgwọ Ịgwọ Ọkụ
Ihe omume & ule
Ntugharị & Mkparịta ụka
Ndị a na-egwu golf
Maka Ndị Mmụta & Ndị Nne na Nna
Nnwale Ụlọ Akwụkwọ
Atụmatụ & Ịmụ ihe
Inmigracion na Espanol
Ndị omekome mara ọkwa
Okwu Ọchịchị Canada
N'okpuru nzuko omeiwu nke Kanada, Ụlọ Ndị Omeiwu Na-ejide Ike
Dị nnọọ ka ọtụtụ mba Europe, Canada nwere usoro gọọmentị nke omeiwu, ya na ndị omekome bicameral (nke pụtara na ọ nwere ahụ abụọ dị iche iche). Ụlọ Ndị Gọọmenti bụ ụlọ dị ala nke nzuko omeiwu ya , ọ bụ mmadụ 338 họpụtara.
Ndị ọchịchị British North America malitere na Dominion nke Canada n'afọ 1867, a makwaara dị ka Iwu Iwu. Canada nọgidere na-achị achị na-achị achị ma bụrụ onye òtù nke Commonwealth nke United Kingdom.
Ya mere a na-eme ka nzuko omeiwu Canada dị ka ọchịchị UK, nke nwekwara Ụlọ nke Commons (mana ụlọ ndị ọzọ nke Canada bụ Senate, ebe UK nwere Ụlọ Nna).
Ụlọ abụọ nke ụlọikpe Canada nwere ike ịmebata iwu, ma naanị ndị òtù nke House of Commons nwere ike ịmepụta ego ha na-eji emefu na ịzụlite ego.
Ihe ka ọtụtụ iwu Canada na-amalite dị ka ụgwọ na House of Commons.
N'ọgbakọ Commons, MPs (dịka ndị nnọchiteanya nke ndị omeiwu mara) na-anọchite anya ndị otu, na-atụle esemokwu mba na arụmụka na ịtụle ego.
Ntuli aka na House of Commons
Iji ghọọ onye MP, otu onye na-agba akwụkwọ na-agba ọsọ na nhoputa ndi ochichi. A na-eme nke a n'afọ anọ ọ bụla. Na nke ọ bụla n'ime obodo 338 dị na Kanada, ma ọ bụ ọgba aghara, a na-ahọpụta onye na-enwerịrị akwụkwọ nhoputa aka na House of Commons.
A na-ahazi oche dị na Ụlọ ndị Commune dị ka ndị bi na mpaghara na mpaghara ọ bụla.
Mpaghara ochichi niile ma ọ bụ ógbè Canada ga-enwe ma ọ dịkarịa ala ọtụtụ ndị nnọchiteanya nọ na House of Commons dị ka Senate.
Ụlọ ndị dị na Kanada nwere ike karịa ya Senate, ọ bụ ezie na nkwado nke abụọ ahụ dị mkpa iji dozie iwu. Ọ bụ ihe dị iche iche maka ndị omeiwu ịjụ ụgwọ mgbe otu Ụlọọrụ Commons gafere.
Na gọọmentị Kanada na-ahụ naanị n'ụlọ ndị Commons; Onye Minista Minista na-anọgide na-arụ ọrụ ọ bụrụhaala na o nwere obi ike nke ndị òtù ya.
Òtù Ụlọ Nzukọ Ndị Isi
E nwere ọrụ dịgasị iche iche dị n'etiti Ụlọ ndị Commons Canada.
Ọ bụ ndị MPs na-ahọrọ Ọkà Okwu ahụ site na nchịkọta nzuzo mgbe ọ bụla nhoputa ntuli aka ọ bụla. Ọ na-elekọta Ụlọ Ndị Commons ma na-anọchi anya ụlọ dị ala n'ihu Ụlọikpe na Ọchịchị. Ọ na-elekọta Ụlọ Ndị Commons na ndị ọrụ ya.
Prime Minista bụ onye ndú nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ike, na dịka onye a bụ isi nke ọchịchị Canada. Ndị isi na-elekọta ndị nnọchiteanya nke Ụlọ Nzukọ na-aza ajụjụ na House of Commons, dị ka ndị ibe ha Britain. Prime Minista bụ onye nnọchiteanya MP (mana e nwere ndị ụkọchukwu abụọ bụ ndị malitere ịbụ ndị isi).
Ọ bụ onye ụkọchukwu na-ahọpụta ndị nnọchiteanya a ma họpụta Gọvanọ General. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ bụ ndị MPs, ma ọ dịkarịa ala otu onye nnọchiteanya. Ndị isi oche na-elekọta otu ngalaba dị na gọọmenti, dịka ahụike ma ọ bụ agbachitere, ndị odeakwụkwọ na-akwado ndị omeiwu, ndị Omeiwu na ndị omeiwu họpụtara.
Enwerekwa ndị ozi nke ala, nyere ndị ọrụ ụlọ ọrụ aka ka ha nyere ha aka n'akụkụ ụfọdụ nke ọchịchị.
Onye ọ bụla nke nwere ọ dịkarịa ala oche iri na abụọ na House of Commons na-ahọpụta onye MP ka ọ bụrụ Onye Ndú nke Ụlọ ya. Onye ọ bụla n'ime ha ghọtara na ndị omempụ nwekwara ụtarị, onye na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ndị omeiwu na-abịa maka nhoputa, na ha na-anọchite anya nnọkọ oriri ahụ, na-eme ka ọnụnọ dị n'otu.
Ọkwá na-ebu ụgbọ elu ụwa maka ndị Canada
Kedu Asụsụ Ndị Canada Na-ekwu?
Ịme ntuli aka na nhoputa ndi Canada
Eziokwu Eziokwu na mpaghara Quebec
Ịgbanwe Ozi Adreesị Gị N'Ịntanet
Agha Ypres 1915 Na-efu 6000 Ọdachi Canada
Afọ nke ọtụtụ na Canada na Ndepụta site na mpaghara
Ngwa Ojiji Maka Ụlọ Ọrụ Ịnweta Ọrụ Canada
Otutu gọọmentị na Canada
Eziokwu nke Prince Edward Island
T4RSP Ụkwụ Ụkwụ
Mụta asụsụ French Une Nana
Agha kachasị mma na nke kachasị njọ banyere ihe ndị dị n'okpuru ala
TV & Nkiri
Ide ederede na klas nke otu
Maka ndị nkụzi
Adjectives na ebe ha
Ùnu Na-enwe Mgbochi Na-ebi N'anya Anya Gị?
Ụmụ anụmanụ na ọdịdị
Iwu Agha nke 1973
Jiri na Omission nke isiokwu kwuru n'asụsụ Spanish
Nnukwu Oké Osimiri ahụ
Ihe kacha mma 8 kachasị mma maka ịzụta na 2018
Ihe atụ SAT maka nbanye na kọleji Delaware
Otu esi achọta ihe omumu echiche nke ihe omumu
Ndị na-achọpụta Kọmputa Kọmputa
Nkwupụta na Afọ nke Ọgbakọ mbụ
Ụdị Onye Ndú Dị Mkpa?
Ihe omume ntụrụndụ na ihe omume
Kedu ihe a na-eme ka a kwadoro mgbochi na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ?
Ot'u esi esi ak uzi ihe
Mars na Virgo - gị Virgo Mars
Ulo oru US nke afo 1960 na afo 1970
Ememe Ememe Ndị Ukwuu nke Ndị Alakụba Nabatara
Ndị Rom Kweere Ụgha Ha?
Kedu ihe bụ Summerland?
Eileen Gray, Onye Na-abụghị Onye Nhazi na Onye Nhazi
Esi ede akwukwo ulo akwukwo nke ulo akwukwo n'igwe
Kedu ka NASCAR Splits si nweta ego nrite
M Kwesịrị Inweta Ngalaba Nchịkọta Ọrụ?
Otu esi abata na Art Art na eserese gi
© 2020 ig.eferrit.com